ithunyelwe ku Space olungenasiphelo . unkulunkulu . yonke . uthando
Yonke into kodwa amandla. Konke oku kumele, waguquka, waguquka, ngcono. khona Energy yomgangatho nelula. Indlela elula yokwabelana amandla kwi the frequency lokungcangcazela. Ngaphakathi lokungcangcazela ngalinye amandla rhoqo ingathatha ifom enye okanye enye. Oku kudala yinto kumaza athile lokungcangcazela. Izinto kungaba ezininzi. Ukuzibandakanya omnye komnye, ukunceda ukuphucula frequency lokungcangcazela ekhoyo. Ngaloo ndlela Amandla ngokunokwabo yenye iintlobo eziqhelekileyo ngakumbi Energy, equlethe konke.
Eneji bezinto obungafaniyo kakhulu. umzekelo, Energy eblowu okanye orange, Atomic Energy, energy Life, amandla ukwandisa, star Amandla okanye umhlaba kunye nezinye.
umzekelo, sokuvalwa amandla Yothando, ungakwazi ukungena amandla ubomi. Kubonakala ngathi yimbonakalo wendalo kunye nokuzalwa kuyo nayiphi na Worlds bendawo.
Kwimeko xi endalo amandla usoloko yimvakalelo Uvuyo. Yeyiphi siku uhlobo ngokomoya. injabulo – esi sikhokelo, womncedisi iqabane bonke na onyukela.
Kule AYFAAR yonke (yonke yethu) enye karhulumente aphezulu uphuhliso – uthando. xa isidalwa, ivela, ifikelela States Uthando kwemibandela – ukuba unako ukuyoyisa iphela badlulele. Kulo mzekelo, akukho mfuneko ezithile ukuze bafumane amava kwenye yonke.
Cosmos yayo khona uthando novuyo. Akukho sithuba.
Naluphi na uhlobo ubomi azalwe kabini:
1) okokuqala – Khona.
2) okwesibini – ukuba baphile.
Oku kusebenza kwabantu uhlobo aBantu.
Ukuzalwa lokuqala imele ukuyilwa amandla ulwazi iziyobisi, ngazo obizwa ngokuba umphefumlo okanye ukwazi.
nizalwe ngokutsha – kwenye ngumfuziselo Worlds, esebenzisa amandla ubomi. Ngokuqhelekileyo oku lilandelwa ekuphuculeni umzimba sele ezikhoyo kule Bandise emzimbeni. Emva koko kukho zemali amava ngonxibelelwano leyinene engqongileyo esebenzisa umzimba.
Ekugqibeleni, kuvela: Ukuba ixesha lokuqala uyakwazi Ukho; okwesibini – siphile. Yaye oko bekuya kuba ebazisa ngcono.
Ukufumana ithuba lokuba khona, Consciousness yi iziyobisi ulwazi-amandla, eshukuma yefrikhwensi ethile okanye uluhlu frequency othile. Ngaloo ndlela ngayo iimpawu kunye nobuchule ezithile.
Energy ngokuqhelekileyo bazakhele, nigqibela a frequency esezantsi ukuya kumaza eliphezulu. Le nkqubo kakhulu elide yaye wonke umntu uyakwazi ukuphuhlisa ezingqondweni zabo. Uninzi ngenxa yeempazamo zalo self-umonakalo ukuthotywa. Ngenxa yoko, kwi Indalo kwakukho AYFAAR ingxaki.
Ubunokwazi kunceda ukusombulula le ntlekele wadalwa, ezifana Energy of Life Energy. Yeyiphi uvunyelwe ukudala indalo umiwe ngabantu, Consciousness into eshukuma ngayo ezahlukahlukeneyo ezitsho ezahlukeneyo. Ingongoma yokudala nezigwinta kukukwazi aphuhliswe ngokulula kakhulu Consciousness, ukuba ngokuzimeleyo ukwenza. Olu phawu livela kuphela yinto, ukuba, ekhona abanobuqhetseba nezigwinta, ngokwaneleyo ukuba ulandele iingcebiso ukwazi advanced baze baphuhlise phantsi kweliso labo. Ngaphezu koko, bonke abemi babe umzimba ezifanayo ezisebenzayo, leyo eyenza kube lula ukuba kubadlali kuphuhliswa kakhulu yaye ngaloo ndlela kuphuculwe yaye siye phambili ngendlela ethembekileyo ubungqina bokuba.
Kodwa izidalwa ubuntwana, kunye nabo, abaye ndayihluthwa ingqondo, Siye wabukela le ndawo waza wenza, oko akuthethi ukuba kukhule kwisicwangciso oMdali, kuba awukwazi ukusebenzisa abantu phambili iinjongo zabo, ukucombulula iingxaki zabo; ngolawulo olulula lwamacebo bonke kwinqanaba yomzimba, wenza iinzame ezibambeneyo ezizama (mhlawumbi ngabanye) ukufezekisa ubukhosi uze uqhubeke ukusebenzisa iinjongo zabo. Kwimeko ukuba isiphelo amandla akhe ebomini – ngokwaneleyo nje ukweba kuyo ukusuka, abasabambelele iye. Ngamanye amazwi, abo baselula, uyaganga, uhlangabezane: abo ndizele ugwebo kweli hlabathi kutshanje kuphela. A, ukuze kungabikho namnye wabona, Eyona nto ibalulekileyo ukuba ukunika ixesha ukuze. Ngenxa yoko yobusela ekrelekrele izidalwa crazy balahlekelwa imizimba yazo kakhulu subtle, kwaye babe umzimba wenyama, leyo kuphela, yaye zonke iindlela zokuphila kwabo. Ekubeni, ngenxa iimpawu zakhe umphefumlo esisesabo rhoqo Yodilizwa – kuphela indlela yokuba zingazala – le ezinezakhi. Kanye inzuzo ekhoyo ukubonisa wonke umntu ukuba, ukuba uThixo akakho niwubophe kuzo zonke iintlobo ubomi eziphilayo, kuba luhlobo kuphela yobukho. Kwaye njalo ingxaki ngxi yaba ithumba yokusombulula. iindawo ezinjalo zidla ngokuba “ithumba space”. Le ngxaki elula: bonke-nje baphuke Order cosmic. Ukuze nilicombulule – ngokwaneleyo ukubuyisela ezilungelelaniswe.
Imilo ye nethumba.
Kulo mzekelo, shape ithumba Umele zibolile “shirt” ngaphakathi sicima, leyo ulondla imixholo wayesaphila “ezonga”, ach translate Korn. linear Ngaloo inzalo “ezonga” Asinto enqwenelekayo ngenxa disappearances kunokwenzeka nangoku Content usaphila “ezonga”, leyo feed kanye “ithumba”. Nakuba “ithumba” liyaziwa, kwaye isebenzisa ubomi wendele nje nabafo abazizibambiso, njengesiqinisekiso ikhona, leyo kwindawo ziyingozi kakhulu.
Nokuba kunyango ngamathumba kunokwenzeka? ukuba, oko kunokwenzeka, ukuba “ithumba” Wamnikela ezandleni cosmic yooGqirha. Kodwa ukusukela ukuba rhoqo bazifihla kubo abaleke – mhlawumbi, ayibonakali Lo mcimbi kunokwenzeka.
Ithumba nayo waqonda njenge cheater, edulusele kumacala omabini:
1) “Imixholo ophilayo” waxoka Ngubani na uThixo wathi, yena kuye.
2) UThixo, yena weyisa utsho, ukuba “kulungile! Konke esifuna ukukwenza, kwenzeka ntoni kubo”.
A lenkohlakalo eqhelekileyo, apho ekwaziyo ekhoyo boqobo eliphakathi “ithumba”.
Ukuhlala kwindawo, mhlawumbe, umntu kufuneka kuphulukana umzimba wakhe. lento yenzeka. ungalilahli ithemba, ukuba oku kwenzeka. Eyona engundoqo ixhasa ukubumbana cosmic wamphakamisa woyise intsimi entsha baze Space. Kodwa asifanele bazibeke obuchwepheshe engafanelekanga zobugorha, ekhokelela ekumeni wobomi, okanye alahlekelwe umzimba ngenxa naivety, okanye umnqweno yobuyatha ukunceda umntu, ndithembe ukuba kuyimfuneko oko umntu, Ngubani na oya kukulibala ngephanyazo.
Mhlawumbi nawe ube sisazinzulu – kungaba akukho. Mhlawumbi nawe awunguye okokuqala – kungenzeka yebo. Mhlawumbi uya nabantwana – kungaba akukho. Mhlawumbi nawe awunguye happy – kungenzeka yebo.
Khumbula, ukuba amandla ephantsi-frequency – Kuyinto embi. Kokukhona kubaluleke kakhulu isakhono, zingabantu. Kungaba ezivuthuluka, kwaye nokulungelelanisa okanye ezinye. kunjalo, musa ukulimaza bethu.
Ngokuqhelekileyo ahlale umhlaba akuguquki ncam iintlobo zobude. Oku kwenza bonke abantu ukuba emsebenzini kuphuhliso lwabo, ekubeni, nje malunga, e liyenza, ngaloo ndlela ukuphumeza isantya enkulu kuphuhliso.
Le ndlela ivumela ezinye amathanga yokugcwalisa Planet aBantu yolwaphulo, ngokususa into ebangela ukuba ukugcina ezintolongweni kunye namava eku- ebusweni Iintshukumo ukubola.
Emhlabeni yonke ngenye eyaziwa ngokuba “ukufa Planet”. Kuyo kukho intlokoma nezilwanyana ezohlukeneyo umgangatho kunye Izidalwa, ohambelana nale lokungcangcazela. Ezo kukubuka kwenzeka kungafane.
Cosmos Infinite nemithetho zaseprayimari. Zisebenza yonke lonke nabo bonke, ukuba (kuquka kwingongoma nganye) kungakhathaliseki indawo, uhlobo frequency, sokumiswa, imithetho karhulumente, kuyiphi inkolo, lokubeka yonke, okanye nakwezinye iimo. Indawo yonke, yonke ngowona.
Space Endless fanele ku Brahman One, uyidala. Amasuntswana ezahlulwe le Brahman One – Atman, Kwakhona Brahman, ngenxa yokuba ubukho babo eyahlukileyo ingangqubani ingqibelelo Consciousness Infinite; Iluphawu ifomu eyahlukileyo bobukho kwisithuba. Kule ngxelo iyinyani, i Self – ke umnini elinye Cosmos njengoko Brahman. Brahman – indawo lomculi. Akukho namnye ngaphandle umbhali of Creation bangakwazi ukuphuhlisa indlela engcono ngayo. Kulo Self unelungelo ukubonisa ukuba kungcono ukuba nokuba inani Ezikhethwayo, kwakunye zingaphi noko ekabani. Ukungqinelana noMthetho ingqalelo lwamandla ungabinako kungqubana umyalelo kuba Self luhlobo ingundoqo.
space – ayikho kuphela kakhulu emangalisayo ongapheliyo ezingenakuphela kodwa nayiphi na into, isihloko, isibi uthuli, indawo. Ukuba ubona into – ubona ipropati yabucala Infinite Cosmos. Ukuba uvakalelwa umoya – Siyipropati yabucala le Infinite Cosmos. Ukuba anithanga nibone okanye uzive – nje ikwa propati yabucala Infinite Cosmos, uthanda nje wena. Brahman – umnikazi cosmos. I Atman – kuyafana nje Brahman. Ngokuqhelekileyo oku kukhumbuza, ukuba walibala ngayo, okanye benze ngathi.
unkulunkulu – Ubunye Holistic.
Phambi kokuba inkcazelo inembe kunazo zonke, ukuba Ziyazaliseka mninzi base- lapha.
ekubeni, engonelisekanga nemiqathango phambi kwendawo yonke engenasiphelo ushiye ungakwazi ngoko nangoko. Ukuziphatha ngalendlela kuthathwa ukubonakaliswa umnqweno ukuba aphume kwi Cosmos. Ngapha koko,, Eso simo sengqondo ukuya khona kwazo, ekhatshwa umnqweno okanye umnqweno ukulandula Kwento, leyo kulingana ngexabiso isicelo ukuphelisa ubukho bakhe shwaka ukusuka Infinite Cosmos. Ukuba babulawe kwaye yamkelwe ngoko nangoko.
Ukuba ukhetha ukwenza nantoni na okanye ukwakha – ukwenza ngokomgangatho, imali indalo zabo zonke uthando lwam kwaye konke okusemandleni ukuba unayo. Ngenxa yokuba kuqala zonke ngowam.
Lifikile ixesha: kukhokelela ekubulaweni isigwebo.
ツ ૐ 卍 yeyemiNquma Shanti – Ukuqonda ♡ ★ ☸
Milky flickers ibhulorho… -
Linganisa ubunzima megalithic –
tunes Instant Metronome
( ( ( space ★ ezithandekayo ) ) )